फेक फेसबुक आइडीबाट ‘सेक्स्सुअल’ स्टाटस लेखी युवतीहरुलाई ट्याग ! – Tandav News
फेक फेसबुक आइडीबाट ‘सेक्स्सुअल’ स्टाटस लेखी युवतीहरुलाई ट्याग !
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७८ श्रावण ११ गते सोमबार १७:२१ मा प्रकाशित
पछिल्लो समय खोटाङमा नक्कली फेसबुक आइडीबाट युवतीको मानमर्दन हुने गरेको पाइएको छ ।
किशोरीहरुलाई फ्रेण्ड लिस्ट खोज्ने, रिक्वेष्ट पठाउने र त्यहीबाट तस्वीर तानेर आइडीमा पोष्ट गर्ने गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अमरप्रसाद गजमेरले बताए । पटकपटक अश्लिल पोष्ट गर्दा परिवारमा समेत तनाव सिर्जना भएको छ । नक्कली फेसबुक एकाउण्ट बनाएर युवतीको मानमर्दन गर्ने र सामाजिकरुपमा बेइज्जत गर्ने व्यक्तिको हालसम्म पहिचान भने भइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठामा प्रश्न चिन्ह उठेको छ । घर परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणसमेत नकरात्मक बनेको छ । व्यक्तिगत जीवन व्यतित गर्नै समस्या बनाएको छ’, एक पीडित युवतीले भनिन्, ‘अब लजाएर चुप बसेर भएन । चुप लागेर बसिरह्यौं भने समाजले उल्टै हामीलाई नै नराम्रो ठान्ने रहेछ । थोरैले हामी निर्दोष छौँ भनेर बुझेका छन्÷बुझ्छन् । तर धेरैले त हामीलाई नै दोषी भनिरहेका छन् । हामी यसबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका छौँ ।’
फेसबुक पीडितयुवतीले दिएको उजूरीको बारेमा अनुसन्धान शुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्सालले बताए । ‘यो टेक्निकल कुरा भएकाले साइबर ब्यूरोसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ । त्यो मान्छे बसेर चलाइरहेको स्थान पत्ता लागिसकेको छ’, उनले भने, ‘त्यो मान्छे विदेशमा भएकाले को हो भन्ने पत्ता लगाउन गा¥हो भइरहेको छ । त्यसको पहिचान गर्न इन्टरपोलमार्फत प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
छब्बिसेमा सशस्त्रको ‘बोर्डर आउट पोष्ट’
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली